WordPress Plugin: တယ်လီပို့နှင့်လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်ပါ
WordPress တွင်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့မဟုတ်စာမူတစ်ခုကိုတည်းဖြတ်လို။ ထိုရှာဖွေမှုကိုရှာဖွေ။ မရနိုင်သောကြောင့်စိတ်ရှုပ်ဖူးပါသလား။ စာမူအသစ်တစ်ပုဒ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထည့်လို့ရသလဲ login စာမျက်နှာကိုအလွယ်တကူရှာတွေ့ရုံမျှနှင့်ဘယ်လိုလဲ။ DK New MediaWordPress အသုံးပြုသူတိုင်းလိုချင်သောအဖြေကိုနောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်သူ Stephen Coley ကနောက်ဆုံးတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ တယ်လီပို့.
တယ်လီပို့ သင်၏ကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်ထားသော WordPress ဘလော့ဂ်အတွက်“ w” ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်လိုချင်သည့်အခါပေါ်လာလိမ့်မည်။ အခြားကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများမှာ -
e - (တည်းဖြတ်) လက်ရှိစာမူ / စာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်ပါ
d - (Dashboard) ဒိုင်ခွက်သို့လမ်းကြောင်းပြောင်းသည်
s - (ချိန်ညှိချက်များ) ချိန်ညှိချက်များစာမျက်နှာသို့ redirects
a - (မော်ကွန်းတိုက်) စာမူများ / စာမျက်နှာများ / စိတ်ကြိုက်ပို့စ်များကိုပြန်ပို့သည်
q - (Quit) လက်ရှိအသုံးပြုသူအား Log in ၀ င်သည်
w - Teleporter ကိုဖွင့်ပါ၊ ပိတ်ပါ
esc - Teleporter ကိုပိတ်လိုက်သည်
သင်၏စာမျက်နှာတစ်ခုတွင်စာလုံးပုံတစ်ပုံတွေ့လျှင်“ w” ကိုနှိပ်ပါ။ နောက်မှ“ e” နှင့် voila တို့ပါ။ အယ်ဒီတာကိုပို့ပြီးပို့စ်ကိုပြင်ပြီးလျှင်မြန်စွာထုတ်ပြန်နိုင်သည်။ ဘယ်လိုဗီဒီယိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက် တယ်လီပို့ အလုပ်များ:
Stephen တွင်နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ချက်အချို့ရှိသေးသည်။ သို့သော်၎င်းသည် WordPress အသုံးပြုသူများအတွက်အံ့သြစရာကောင်းသည့် plugin တစ်ခုဖြစ်သည်။
Tags: stephen coleyတယ်လီပို့wordpress ကိုရဲ့ loginwordpress login menu ကိုwordpress plugin ကိုwordpress ဖြတ်လမ်းများ
သြဂုတ် 21, 2012 မှာ 9: 02 AM
ဤသည်ချက်ချင်းဖြည့်စွက်နေပါတယ်, ကြီးမြတ် !!